Ny fahitalavitra Saint-Petersburg dia misafidy ny mpamoaka medialooks VT mpanafika mba hanaterana ny sakafon'ny tompony amin'ny toerana lavitra NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Vaovao » Ny fahitalavitra Saint-Petersburg dia misafidy ny serivisy medialooks VT mba hanomezana sakafo ho an'ny mpampianatra hanala toerana bebe kokoa
Ny fahitalavitra Saint-Petersburg dia misafidy ny serivisy medialooks VT mba hanomezana sakafo ho an'ny mpampianatra hanala toerana bebe kokoa
Saint-Petersburg Television dia misafidy mpizara VT Medialooks VT hanaterana ny fakan'ny Master amin'ny toerana lavitra
Vidiny mahomby sy azo ianteheranae Ny vahaolana dia manolotra ny famahanana tompony any amin'ny toerana lavitra be
Saint-Petersburg - Novambra 25, 2019 - Medialooks, mpamatsy fitaovana maneran-tany momba ny vahaolana mampihetsi-po mihetsika an-tsarimihetsika mamaly, dia faly manambara fa ny fahitalavitra Saint-Petersburg dia nisafidy ny VT Server manapaka ny tany mba hanaterany ny famahanany ny tompony any amin'ny toerana lavitra sy ny vatofampeo vaovao ao amin'ny an-tsaha miaraka amin'ny marika intercom sy mpanampy. Mpampiasa voalohany amin'ny serivisy fampielezana ambany be, ny tambajotra fahitalavitra Saint-Petersburg malaza dia manasongadina ny vokatra an-trano sy hetsika mivantana ary mirakotra ny faritr'i St. Petersburg sy Leningrad. Ny haino aman-jery 10 efa-taona dia manome famahanana ny fonosana fantsom-pahalalana ho an'ny Tricolor sy NTV Plus zanabolana serivisy fampielezana.
“Rehefa mamokatra votoaty mivantana, dia manakiana fa ny talenta eo an-tsaha dia afaka mahita ny famahanana ny studio tsy misy hatak'andro amin'ny fihodinana malefaka sy ny traikefa tsy tapaka amin'ny mpijery; izany no tena manakiana mafy ny Medialooks, ” nanazava i Andrey Sablin, injeniera amin'ny fahitalavitra an'ny Saint-Petersburg. "Ny Medialooks VT Server dia mamela ny mpanantona ihany koa hampiasa ny findainy ahafahana mandray ny famahanana fandaharana amin'ny alàlan'ny fanokafana URL iray ao amin'ny mpizany ihany, izay tena ilaina."
"Medialooks dia mirehareha fa manana Saint-Petersburg ho iray amin'ny mpanjifanay voalohany amin'ity vokatra vaovao mampientam-po ity," hoy Andrey Okunev, Tale Jeneralin'ny Medialooks. "Haingam-pandeha sy tsy misy olana ny fametrahana ary ny fanoloran-tenanay ny hanohana tanteraka ny fitakian'ny hetsika 24 / 7 tsy voasakantsakanana ary ny fanatanterahana asa tsy misy toa azy raha mitazona ny fahatokisana tsy tapaka dia nahatonga ity fampielezan-kevitra manan-danja ity hitokisana ny fifindrany amin'ireo fitaovana rindrambaiko."
VT Server dia rindranasa be mpampiasa sy miorina amin'ny rahona izay manasongadina ny fandaharam-potoana haingana ny indostria miaraka amin'ny fametrahana vita amin'ireo ekipa mpandray sy mpitazam-pifamoivoizana ao anatin'ny pika telo fotsiny. Mampifandray ireo toerana marobe amin'ny fomba tsy misy tomika, mizana haingana miaraka, mizana haingana amin'ny alàlan'ny fitaovana, ary manohana ny fitaterana horonan-tsarimihetsika 4K avo lenta amin'ny Internet Public mankany amin'ny toerana marobe amin'ny alàlan'ny fifandraisana tokana miaraka amina latabatra tsy misy dikany fotsiny 100 ms. Ity vahaolana rindrambaiko mpisava lalana ity dia mihazakazaka amin'ny codecs CPU sy GPU, mampiasa fitaovam-pamokarana jeneraly off-the-shelf mba hanomezana fahafaham-po sy lanja farany amin'ny alàlan'ny fanesorana ny filàna hardware manokana. Manohana hetsika mivantana sy ivelany, ity vahaolana Medialooks ity dia ahafahan'ny fakan-tsary PTZ mifehy lavitra, afaka manisa toerany amina am-polony, ary arahi-maso sy tantanana amin'ny alàlan'ny rindranasa raharaham-pifandraisana amin'ny alàlan'ny mpampiasa. Ny VT Server dia mampiditra ireo ekipa mpamokatra horonantsary fahatelo avy amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny browser ihany.
Ny VT Server, natao manokana ho an'ny famokarana mivantana, dia manohana ny onjam-pahitalavitra, orinasa mpamokatra horonan-tsary, toeram-pivarotana hetsika, kianja, trano ivavahana, studio e-fanatanjahantena na fikambanana hafa mila fampifandraisana ireo serivisy video amin'ny tranonkala lavitra lavitra. Miorina amin'ny teknolojia SRT sy WebRTC, ny VT Server dia manasongadina ny fandefasana ny renirano mandritra ny famokarana fakantsary marobe ary mamindra ny fandefasana kalitao miaraka amin'ny horonantsary 4K 60p miaraka am-peo multichannel 512 kbps. Mety ho an'ny toeram-piasana NDI® sy SDI (Blackmagic Design ary ny AJA tohanana) dia manohana ny fantsom-alpha koa izy ireo amin'ny maody roa, ary koa ny famenoana sy famoahana lakile. VT Server dia azo atao namboarina hiasa ao amin'ny rahona Medialooks na amin'ny fotodrafitrasa rahona manokana na vahoaka ho an'ny mpanjifa voafidy.
Ny tena zava-dehibe dia tsy hanapaka ny tetibola velively ny VT Server – atolotra ho toy ny famandrihana miaraka amina drafitra momba ny vidiny azo vinavinaina mialoha izay ahafahan'ny mpandraharaha mitantana ny OPEX ary mijanona ao anatin'ny tetibola.
Nampiana Okunev, "Faly izahay fa ny fanavaozana vaovao dia nahatonga ny fandaharam-pianarana Saint-Petersburg TV ho mahomby sy azo itokisana kokoa, ary manantena izahay fa hitondra azy ireo fanatsarana satria ny vokatra dia mivelatra kokoa hampidirana ireo teknolojia SRT sy WebRTC sy hanampiana fahaiza-manao vaovao, toy ny fitaterana horonan-tsary tsy voafehy. "
Miakatra, miakatra ary miala. Ny fakantsary ATOM an'i Chip an'i Dream Chip dia mandray mpijery miaraka amin'i David Blaine izay mahafaty ny ainy - Novambra 6, 2020
TAG dia manampy ny Protocol SCTE 35 ho an'ny HLS sy ny DASH Streams - Novambra 5, 2020
Peter Wharton dia manatevin-daharana TAG Video Systems ho talen'ny, Paikadin'ny orinasa - Oktobra 21, 2020
fampitana injeniera fampitana Engineering fandraisana anjara Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Medialooks Server medialooks VT Fahitalavitra Saint-Petersburg SoftAtHome, MStar, CES2017 Telo sy zana-tsipìka TV Technology Ultra HD Forum Video injeniera vahaolana fitaterana fandefasana horonantsary 2019-11-25
Previous: CRM Studios dia mbola mandroso matanjaka miaraka amin'ny Facilis